Pep Guardiola: “Samir Nasri wuu joogi karaa Manchester City” – Gool FM
Pep Guardiola: “Samir Nasri wuu joogi karaa Manchester City”
(Manchester) 29 Agoosto 2016 – Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City Pep Guardiola ayaa shaaca ka qaaday in Samir Nasri uu joogi karo kooxda xagaagan haddii uu doono.
Nasri ayaa la la xiriirinayey inuu ka dhaqaaqi doono garoonka Etihad, kaddib markii la sheegay inuu kordhay miisaankiisa ama uu cayilay, waxaana kooxaha xiddigan reer France xiisaynayey ka mid ah kooxaha reer Talyaani ee AC Milan, Inter Milan iyo Roma.
Si kastaba, laacibkan qadka dhexe ayaa kulankiisii ugu horreeyey xilli ciyaareedkan ka soo muuqday Man City 75’daqiiqo kulankii ay ka adkaadeen West Ham United, waxaana Nasri oo bedel ku yimid ciyaarta lagu bedelay Nolito, tababare Guardiola ayaana kulankaas kaddib albaabada u furay inuu Nasri sii joogo.
“Nasri waan uu sii joogi karaa, Samir waxa uu noqday mid cayilan, laakiin 7 maalmood kaddib 10 maalmood waxa uu ahaa mid cajiib ah sida uu tababarka u qaadanayey, tayadiisu waa heer sare, waxa ay ku xiran tahay isaga, haddii uu doonayo inuu na caawiyo, oo uu joogo si uu qeyb inooga noqdo isaga ayey ku xiran tahay.” ayuu Guardiola u sheegay suxufiyiinta.
Man City ayaa 3-1 uga adkaatay West Ham kulan ka tirsan Premier League, Guardiola ayaana heer sare ku bilowday noloshiisa Dalka Ingiriiska.
RASMI: Didier Zokora oo dib ugu laabtay Horyaalka kubadda Cagta Hindiya... (Kooxdee ayuu ku biiray haatan?)